Garoobbada Koofur Galbeed oo is garabsanaya - Aayaha
Way adag tahay in gayiga Soomaalida ay degto lagu arko garoobbo is bahaystay oo doonaya in ay is caawiyaan, balse Koofur Galbeed Soomaaliya waxaa ka dhisan urur ay leeyihiin qaar ka mid ah haweenka garoobbada ah, waxaana ay la baxeen magaca Ururka Garoobbada Koofur galbeed.
Ilaa seddex xafiis ayay ku leeyihiin Koofur galbeed dhaxdeeda, Sida ay inoo xaqiijisay Hodan Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururkan. Xafiiskooda ugu weyn ayaa ku yaala magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay.
Waxaa uu dhisan yahay Ururkan garoobbada mudo shan sano iyo bar ah,markii ugu horeysey ee la dhisayey waxaa lagu bilaabay laba boqol oo haween garoobbo ah, tirada hadda u diiwaan gashan ururkan waxay dhan yihiin Laba kun iyo afar Boqol sida ay BBC-da u sheegtay Hodan Maxamed Xasan oo ah Gudoomiyaha Ururkan, islamarkaana iska laheyd fikirka Ururkan lagu dhisey.
”Duruufa jiro awgood ayaan ururkan u asaasnay, qof walba dhibta marki ay taabato ayuu dareemaa, muddo badan ayuu ururkan dhisan yahay, xafiisyo ayaan ku leenahay Xuddur,Afgooye iyo Baydhabo” sidaasi waxaa tir Hodan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka garoobada ee Koofur Galbeed.
Todobaadkii laba jeer ayay isugu yimaadaan xafiiska Baydhabo ay ku leeyihiin inta Baydhabo ay ku joogaan, si la mid ah Xafiisyada kale ee Magaalooyinka Afgooye iyo Xuddurna haweenka jooga Khadka taleefonka ayey ku kala war-qaataan waxayna iska wareysanayaan xaaladahooda iyo wixii kusoo kordha.
Faduma Maxamed ururka garoobada Baydhabo ayey ka mid ahayd muddo shan sano ah balse hadda way iskaga baxday madaama dib loo guursaday.
“Ururka ayaan ka tirsanaa shan sano, qaaraan ayaan iska aruurin jirnay, waana is kaalmayn jirnay, ganacsi yar ayaa na loo furay, waxaan lahaa sagaal caruur ah qaarna iskool ayey dhigan jireen, qaarna ma aysan dhigan jirin, waxaan waayay qarash aan iskoolka uga bixiyo, hadda nin kale ayaan is guursanay oo ururka sidaas ayaan uga baxay” ayey tiri Faadumo.
Haweenkan ayaa sababta ugu weyn ee ururkan ay u sameysteen waxay tahay iney iska warqabaan dhaxdooda, qofka noloshiisa sida ay tahay, iney isku gurmadaan oo la caawiyo haweeneydii ka mid ah ururka ee caawimaad dhaqaale ama daaweyn u baahan in wax loo qabto, iyo in wacyi gelin dhaxdooda ah ay sameystaan.
Hodan Maxamed Xasan ayaa BBC-da u sheegtay inay jiraan dumar garooba ah oo ay gacan ay ka gaysteen guurkooda, ka dib markii ay la yimaadeen niman aan qarash badan haysanin.